Posted by Tranquillus | Apr 18, 2020 | Ny fahaiza-manaon'ny serasera sy ny serasera
Amin'izao fotoana izao, mihoatra noho ny mahazatra, mandany ny fotoananao amin'ny fandefasana sy fandraisana ireo karazana namany Sary. Matetika ianao no mamarana ny hafatrao amin'ny "Tsara", "fiarahabana indrindra" na "fifaliana" hafa. Tsy voatery nanao drafitra ianao d 'manoratra mailaka amin'ny lehibenao. Na eo amin'ny mpiara-miasa aminao na amin'ny lehiben'ny mpanara-maso anao. Te hampifanaraka anao ianao ary hanampy zava-baovao kely amin'ny endriny mazoto ampiasainao amin'ny faran'ny mailaka. Ny fisafidianana teny ivelan'ny andian-teny mahazatra mba hamaranana hafatra dia hampitombo ny tanjaka. Saingy mazava ho azy fa ny fampiasana teny tsy mendrika na fanafohezana ny karazana SMS dia mety hiafara amin'ny dia an-dalambe. Tsy afaka manoratra afa-tsy amin'ny olona ianao. Indrindra amin'ny tontolo matihanina.
Ohatra 42 amin'ny santionany pôlitika ilaina ampidirina amin'ny faran'ny mailaka.
Ireto misy ohatra 42 misy andian-teny mahalala fomba izay azonao ampiasaina hamaranana ny mailakao amin'ny fomba. Mail no tiako holazaina fa tsy taratasy. Raha manapa-kevitra ny handefa taratasy amin'ny alàlan'ny mailaka ianao. Lazao mazava ao amin'ny vatan'ny hafatrao ny fisian'ny antontan-taratasy, CV na taratasy fanakonana ohatra. Na inona na inona ny haben'ny antontan-taratasy izay nampidirinao ho lampiranana. Raha litera izy io dia hifarana amin'ny fehezanteny mihaja mahazatra.
Miaraka amin'ny fisaorako,
Maniry anao andro lehibe
Ianao dia manaja
Amin'ny fanajana rehetra,
Ry namako rehetra,
Raiso ny fifampiarahabana tamim-pahatsorana
Mirary soa hariva,
Manomboka tsara amin'ny herinandro,
Manaova faran'ny herinandro tsara,
Miaraka amin'ny firaisan-kina rehetra
Amin'ny fanohanako rehetra,
Miaraka amin'ny fangorahako rehetra,
Miaraka amin'ny famporisihako,
Miaraka amin'ny fiderana nataoko,
Miandry ny fiverenanao ianao,
Miandrandra ny hiara-hiasa,
Mijanona eo amin'ny toeranao,
Maniry hampahafantatra anao amin'ny fomba mahasoa ianao,
Manantena ny hanampy anao,
Amin'ny saiko rehetra
Hahita anao any aoriana
Miandry ny valin-teninao,
Misaotra anao nijery
Misaotra mialoha mialoha
HAMAKY Ahoana no handresena lahatra amin'ny sehatra matihanina?
Fandaharana ara-dalàna mahazatra mba hampidirina ao amin'ny mailakao
Azafady tompoko, tompoko, ny fanehoana fanajana lalina ahy.
Azafady tompoko, tompoko, ny fanehoana ny fahatsapako feno fanajana.
Minoa azafady, tompoko, ao am-poko sy ny fanajana.
Azafady tompoko, Andriamatoa, arahaba tompoko.
Azafady tompoko, ny fanehoana fanajana lalina ahy.
Azafady tompoko, manome toky ny hanajako ahy lalina.
Raiso, Madama, Andriamatoa, ny arahaba feno hajaiko.
Raiso, Madama, Tompoko, arahaba-tena.
Azafady tompoko, Andriamatoa, tompoko tsara indrindra.
Azafady tompoko, tompoko, ny toky ny fijeriko indrindra.
Raiso, Madama, Tompoko, ny fanaraharako indrindra.
Azafady tompoko, tompoko, ny fanehoana fahatsapana feno fanajana sy fandavan-tena ato aminay.
Azafady tompoko, tompoko, ny fanehoana ny fahatsapana feno fitiavana ananantsika.
Miarahaba anao aho, ry Madama, Andriamatoa, ny fanehoam-pitiavako ahy indrindra.
Miandry ny fifanarahanao, azafady, ekeo, Madama, tompoko, ny taratasiko tsara indrindra.
Raha liana amin'ny tetikasa ianao, andao hihaona. Azafady tompoko, Andriamatoa, arahaba tompoko.
Miandry ny valin-teninao, azafady, ry Madama, Andriamatoa, arahaba-tena.
Miandry valiny avy aminao, mangataka aminao aho, Ramatoa, tompoko mba ho tsara fanahy amin'ny fandraisana fiarahabana feno fanajana indrindra ahy.
Amin'izany fomba fiasa izany dia ho velom-pankasitrahana aho ry Madama tompoko.
Raha miandry valiny izay antenaiko ho ankasitrahana aho, mangataka aminao aho handray, Madama, tompoko, ny fanaraharako indrindra.
Fampivoarana mahomby tsara indrindra ho an'ny mailaka Jolay 25th, 2021Tranquillus
Teo alohaNy tatitra momba ny hetsika, fitaovana ilaina hanambarana ny asanao.
manarakaAtaovy toy ny boaty mozika ny boaty mailakao
Famoronana mailaka hanamarinana faharetana
Ahoana no handresena lahatra amin'ny sehatra matihanina?
Lazao ny fialanao amin'ny fialan-tsasatry ny mpampiasa anao